काँग्रेस एमाले लाई एकात्मक व्यवस्था को राप्रपा बनाउने क्रांति हो यो
यस क्रांति को उद्देस्य सुशील लाई बालुवाटार बाट घोक्रेठयाक लगाएर फाल्नु हो। यस क्रांति को उद्देस्य संगठनात्मक रुपले काँग्रेस एमाले लाई एकात्मक व्यवस्था को राप्रपा बनाउने क्रांति हो यो। यो क्रान्ति प्रतिक्रांति माथि विजय पाउने आकांक्षा का साथ अगाडि बढेको क्रांति हो। शहीद को रगत को शपथ खाएको क्रांति हो यो।
अंतरिम संविधान चाहिं रहन्छ। २००६ अप्रिल क्रांति र मधेसी क्रांति को सार अंतरिम संविधान मा छ। अरु सबै जान्छ। यो चरी घैंटे गठबंधन सरकार जान्छ। यो चुनावी धाँधली को बालुवा माथि खड़ा रहेको अवैध संविधान सभा जान्छ।
नया अंतरिम सरकार को गठन हुन्छ। सुशील ले राष्ट्र लाई सम्बोधन मात्र गर्ने हो। उसले बोल्दा के भन्ने त्यो हामी निर्णय गर्छौं।
तेस्रो संविधान सभा को चुनाव मा प्रतिक्रांतिकारी हरु सबै को जमानत जफत हुन्छ। निष्पक्ष चुनाव हुन्छ।
त्यस अगावै क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन हुन्छ।
एमाओवादी ले संविधान सभा न छोड़े अंतरिम सरकार मा दुई तिहाई संघीय गठबंधन को एक तिहाई काँग्रेस एमाले एमाओवादी को। तर एमाओवादी ले संविधान सभा छोड्छ अहिले भने क्रान्ति पछि काँग्रेस एमाले भनेका परास्त शक्ति। अंतरिम सरकार मा ठाउँ पाउँदैनन्। कृष्ण प्रसाद को कैबिनेट मा मरीच मान ले ठाउँ पाएको थिएन।
संघीय गठबंधन र एमाओवादी को मिलीजुली सरकार बन्न सक्छ। २०४६ पछि काँग्रेस र वाम मोर्चा को मिलीजुली सरकार बने जस्तो। आखिर सीमांकन नामांकन मा हाम्रो लगभग सबै कुरा मिल्छ त। सीनियर पार्टनर संघीय गठबंधन हो। अनंत उप प्रधान मंत्री बन्न सक्छन।
अंतरिम संविधान मा क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन थपे पछि काम त फत्ते पो हुन्छ।
धर्म निरपेक्षता सब भन्दा बढ़ी चाहिएको नेपालको हिन्दु लाई
सुशील ले राष्ट्र लाई सम्बोधन गर्ने बेला आउन लाग्यो
हामी सगरमाथाको ‘साउथ पोल’ मा होइन अप्रिल २००६ मा पुगेका छौं
शेर बहादुर देउबा का २२ पुल
काठमाण्डु जागनु पर्यो
ओली को बेमौसम व्हिप, गैर कानुनी, असंवैधानिक व्हिप
संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम
१ मत को ५० रुपया
मधेसी ले जनजाति लाई मझधार मा छोड्दैन
कैलाली र कंचनपुर को संघर्ष
सुशील सँग चिया बिस्किट खान यो आन्दोलन भएको होइन
हृदयेश त्रिपाठी: "ज्ञानेन्द शाहका बेला भएको १९ दिने जनआन्दोलन पनि त आन्दोलनकारीको हातमा थिएन"
चितवन तमसलिंग होइन, थरुहट हो
हामी हरुवाहरुको सम्झना by Krishna Bhattachan
Go Koirala Go!
हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ
कर्णाली को माग पुरा भएको छैन
आरक्षण को Dynamic Formula
३ करोड़ को देशमा ३ लाख पार्टी सदस्य चाहियो
५०० वर्ष अगाडि को समृद्ध कर्णाली आज विज्ञानं प्रवृद्धि को युगमा गरीब किन?
ashok rai Baburam Bhattarai cpn uml Federal Alliance janajati madhesi madhesi janajati kranti 2015 Nepali Congress UCPN Maoist Upendra Yadav